साप्ताहिक संवाददाता , माघ २७, २०७४
यो राशिका स्वामीले प्रेम दिवसदेखि दसैंसम्म आफ्ना जीवनसाथीलाई अत्यन्तै प्रेम गर्ने योग छ । उनीहरूले प्रेमपूर्ण कार्यमा एकअर्कालाई निकै सघाउनेछन् । व्यवसायिक व्यस्तताले केही व्यवधान पुर्‍याए पनि जीवनसाथीको समझदारीले स्थिति सम्हालिनेछ । पुरा पढ्नुहोस्
मकर राशिका मानिसहरू प्रेममा केही उदासीन पाइन्छन् । प्रेमको अभावमा मानसिक तथा शारीरिक रूपमा अस्वस्थ्य रहन्छन् । यिनीहरूको दृष्टिमा प्रेम सुरक्षा तथा एकताको प्रतीक हो र यसले जीवनमा प्रसन्नता एवं सजीवता ल्याउँछ । पुरा पढ्नुहोस्
डा. सन्दुक रुइतका बारेमा धेरै कुरा जान्न पाइयो (डा. सन्दुक रुइत नेपालका ग्लोबल ब्रान्ड) । यसरी संसारले चिनेका अनि ख्याति कमाएका नेपालीहरूका बारेमा पढ्न पाउँदा गर्व लाग्छ । पुरा पढ्नुहोस्
कृष्ण भट्टराई, माघ २७, २०७४
तथा मोडल आयुष्मान देशराज जोशी एक्लै मोबाइल चलाएर बसिरहेका थिए । त्यहाँ लोकप्रिय अभिनेत्री प्रियंका कार्की झुल्किइन् । विगत एक वर्षदेखि प्रेमी–प्रेमिकाका रूपमा रहेका प्रियंका र आयुष्मानले भेट हुनासाथ एक–अर्कालाई अँगालो हाले अनि टेबलको एउटै साइडमा हात समाएर सँगै बसे । पुरा पढ्नुहोस्
प्रवेश शुल्क ३ हजार रुपैयाँ राखिएको यो प्रतियोगिताको विजेता टिमले ३० हजार रुपैयाँसहित ट्रफी, मेडल तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछ भने दोस्रो हुने टिमले १५ हजार रुपैयाँसहित मेडल तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछ । पुरा पढ्नुहोस्
माघ २८ गते प्रारम्भ हुने फुड फेस्टिबल फागुन ३ गतेसम्म चल्नेछ । फेस्टिबलका क्रममा सौराहा रेवान आबद्ध रेस्टुराँहरू १५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था मिलाएका छन् भने होटलमा बस्नेहरूका लागि पनि १५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ । पुरा पढ्नुहोस्
दरबार पोखरा क्याफे म्युजिक लाउञ्जमा भने शुभेच्छा मल्ल, प्रसन्न अधिकारी, डिजे ससपोइजनको प्रस्तुतिमा भ्यालेन्टाइन डेलाई अविस्मरणिय बनाउन सकिनेछ । ७ बजे प्रारम्भ हुने उक्त कार्यक्रम मध्यरात १२ बजेसम्म चल्नेछ । डुंगा रेष्ट्रो एन्ड लाउञ्जबारमा पनि भ्यालेन्टाइन डेका अवसरमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । पुरा पढ्नुहोस्
अहिले प्राय सबैलाई प्रणय दिवसले छोएको छ । पछिल्लो समय प्रणय दिवसलाई सेलिब्रेसनका साथ मनाउने प्रचलन बढ्दै गएको छ । तर, पहिलो पटक प्रेममा परेर प्रणय दिवस मनाउँदै गरेका कतिपय जोडीलाई के उपहार कसरी दिने भन्ने अन्यौल हुन सक्छ । पुरा पढ्नुहोस्
आफ्नो अनुहारको रंगसँग मेल खाने किसिमको फाउन्डेसन लगाउनुपर्छ भने वाटरप्रुफ फाउन्डेसनसमेत लगाउन सकिन्छ । त्यसपछि गालालाई हल्का गुलाफी देखाउन ब्लसर लगाउनुपर्छ । आँखालाई आकर्षक बनाउन आइस्याडो लगाएपछि आइलाइनर लगाउन सकिन्छ भने त्यसपछि मस्कारा लगाउनुपर्छ । पुरा पढ्नुहोस्
माञ्चक स्थान वा प्रेम प्रस्तावका लागि उपयुक्त स्थान छनौट गर्नुपर्छ । भ्यालेन्टाइन डेटिङमा रातो गुलाफको फूल उपहार प्रदान गर्दा वातावरण अझ रोमाञ्चक हुन्छ । पुरा पढ्नुहोस्